Ike - AOOD Technology Limited
Taa, ifufe bụ otu teknụzụ teknụzụ na -eto ngwa ngwa. Ike ikuku na -agụnye ịgbanye ume ikuku ka ọ bụrụ ọkụ eletrik site na iji igwe ikuku. AOOD azụlitela ọtụtụ afọ nke ngwa ngwa maka ikuku ikuku ma nwee nnukwu ihe ịga nke ọma n'inye sistemụ mmezi dị ala na gburugburu ebe siri ike.
A na -ejikarị mgbanaka mgbanaka iji nye mgbama eletriki na ike maka ike na njikwa pitch. N'ime sistemụ hydraulic, ekwesịrị ijikọ mgbanaka mmịfe na njikọta mmiri mmiri iji nye ọtụtụ akara,
nnyefe ọkụ eletriki na nke hydraulic maka imepụtaghachi ọkpụkpọ hydraulic agụba. N'ime sistemụ eletriki, ọ chọrọ mgbanaka mmịfe nwere okirikiri ike dị elu na -ebugharị akara na ike eletriki maka mmegharị mkpọtụ agụba.
A chọrọ mgbanaka mgbanaka ike dị elu iji nye nnyefe dị ugbu a maka inye ume rotor na sistemụ mbanye. Tụkwasị na nke ahụ, iji gboo mkpa mgbakọ mgbanaka mgbanaka agbakwunyere, enwere ike itinye mgbanaka mgbanaka AOOD na ihe ntinye na ndị na -edozi ya, njikọta eriri na -agbanwe agbanwe fiber optic, otu ndị na -agbanwe mmiri mmiri na nkwonkwo rotary RF.
Dị ka onye ndu ụwa niile na mgbaaka mgbazinye, AOOD ewepụtala teknụzụ nnyefe kọntaktị na -amị amị dị elu nke na -ahụ na mgbanaka mgbanaka ike ikuku AOOD nwere ihe karịrị otu narị nde afọ ndụ. A haziri ha ka ha kwekọọ na gburugburu ebe siri ike, ha nwere ike iguzogide oke oke ma ọ bụ obere okpomọkụ, mwakpo nke ájá & uzuzu na mmiri nke oke osimiri.
Ngwaahịa emetụtara: Mgbaaka Mgbakwunye Omenala